Ejansichi karoora hojii waggoottan kurnan dhufaniirratti magaalaa Adaamaatii marii’achaa jira – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Ejansichi karoora hojii waggoottan kurnan dhufaniirratti magaalaa Adaamaatii marii’achaa jira
On Sep 19, 2020 127
Finfinnee, Fulbaana 9, 2013 (FBC) – Ejansiin dhimma kaafamtoota miisoomaa Oromiyaa rawwii hojii bara 2012 fi karoora hojii waggoottan kurnan dhufaniirratti magaalaa Adaamaatii marii’achaa jira.
Ejansichi hoggansaa fi ogeeyyii damee ejansichaa shanirraa walitti baba’an waliin ta’uuni gamaaggama raawwii fi marii karooraa kan taasiisaa jiru.
Raawwii bara 2012n Rakkoo hawaassuummaa diinagdee, kaafamtootnii miisoomaa haaldureewwan guutamuu qaban osoo hin guutamne kaasuu, sirna kaffaltii beenyaa haqa qabeessa fi maalaqa kaffaluu qofa osoo hin taanee kaafamtootnii gara hojjii invastmentiitti akka boba’aan deeggarsa ogguummaa fi leenjii kennuurratti hanqinna bala’aa ture furuu irrattii foyya’insii jirachuun himameera.
Damee hundatti deeggarsa fi hordooffii kaafamtoota miisoomaaf taasiifamuu karaa wal fakkaataa ta’een hojjiirra olchuu irratti hanqinni jiru dhimma xiyyeeffannaa barbaadu ta’uu Itti Aanaan Daayreektara olaanaa Ejansichaa obboo Habtoom Baqqalaa himaniiru.
Marichi har’a eeggalee hanga boruutti kan itti fufu ta’u eeruun Muluu Waaqshumeetu gabaase.
Mariin hojiiwwan foyyaa’insa damee teeleekoom irratti xiyyeeffate Waajjira Muummee…
Mariin sadeenii bifa faayidaa fi mirga biyyooleessaa Ityoophiyaa eegeen…
Dooktar Liyaan hospitaala Ispeeshaalaayizdii waliigala Waraabee daawwatan
Lammiilee fi dhalattoonni Ityoophiyaa Raashiyaa fi Beelaaruus jiraataan haasaa…
Mariin hojiiwwan foyyaa’insa damee teeleekoom irratti…
Mariin sadeenii bifa faayidaa fi mirga biyyooleessaa…
Dooktar Liyaan hospitaala Ispeeshaalaayizdii waliigala…